Buka lezi zinkawu njalo ezithakazelisayo - abayikho nokuguqulwa ngakho, amnandi futhi smart, ezingeke abashiye ubani nandaba! Uyini kwenkawu inja abangenangqondo, yini izici zayo kanye nemikhuba engajwayelekile - lokhu ekutshela izinto ezilandelayo.
izimpawu ezivamile futhi ukubukeka
igama IsiZulu kuhlanganisa eziningana sub-zilwane lezimfene, ezithinta eziningi izici zangaphandle nesimilo efanayo. Ukwazi lezi zilwane ikakhulukazi lolu hlobo, abakwazi udidekile nanoma ubani omunye.
Inja-inkawu, noma imfene, libhekisela Izwe Elidala wezinkawu. Ziyakwazi kakhulu smart, bahlala ngamaqembu amakhulu, ngokuqinile abagcina izisekelo namasiko iphakethe. Baboon ukuhlukanisa izici ezilandelayo zangaphandle:
A usayizi kahle esikhulu - isilinganiso 70-100 cm ukuphakama futhi 25-45 kg isisindo. Amaduna avame kunangendlela nabesifazane.
Inhloko kubonakala esikhulu maqondana emzimbeni. I nomlomo is side futhi ayibanzi, futhi kuso kukhona okuthiwa esihlathini anezikhwama. Kuyinto lokhu ikhanda isakhiwo izimfene neyasemhlabeni yesibili - inkawu inja esinamakhanda (izithombe kwezilwane okusesihlokweni esithi).
I eside, umsila nomzimba omncane, ukufinyelela i isilinganiso 50-70 ngamasentimitha.
Uvolo aminyene, hhayi isikhathi eside kakhulu. Endaweni yekhanda laso inkulu kakhulu kunangendlela esiqwini futhi emikhawulweni.
Ngaphansi umsila e izimfene kuyinto "corn sciatic" - amabili hairless Nenkabazwe pink. Izinsikazi zilungele ukukhwelana, le ngxenye yomzimba bomvu elikhanyayo.
Izimfene wathutha ikakhulu nemilenze emine, kungaba ngokuphelele ukukhuphuka izihlahla, ukugijima bese eqa.
Lapho ungakwazi ukuhlangabezana imfene?
Azisekho ezindaweni eziningi lapho imvelo uhlala inkawu inja engumondli. Incazelo nendlela yabo yokuphila uqinisekisa ukuthi lezi wezinkawu kudingeka isikhala esikhulu ukuhlala ukhululekile zonke nemihlambi emikhulu.
Iningi ukhululekile imvelo ukuze izimfene ndawo asemaqeleni kanye amathafa ase-Afrika. Ngokuvamile umhlambi lezi zilwane manje zitholakala engxenyeni eseningizimu yaleli zwekazi futhi eNhlonhlweni ye-Arabhiya.
izinkawu Inja esinamakhanda ngokuvamile akesabi zabantu, futhi kungaba axazulule kude impucuko, ukwenza ukuketula ngobala: kungaba ukweba ukudla nezilwane ngisho encane yasekhaya.
Phakathi ukuvakashelwa zezivakashi emapaki safari, lapho izimfene ziphile ezimweni khulula, wezinkawu ungagijimi kude abantu, kodwa kunalokho ngizilindele ozokunika abalaleli okukhona.
Uhlaza umzingeli: izinkawu badle?
Ukudla kwesilwane njengoba inkawu inja esinamakhanda, sihlanganise indawo ebanzi kakhulu. Lezi zilwane ungadla kokubili ukudla imifino kanye ukudla okuvela ezilwaneni.
Ngokuvamile izimfene imenyu ukwenza izithelo zemithi yezithelo, amajikijolo, izimpande, mabhungane amancane ezihuquzelayo. Kodwa nakuba isikhona ocebile isitshalo Ukudla, imfene bakwazi yokuzingela hhayi ngaso sonke isikhathi impango encane kakhulu.
Ngenxa izici bokuphila inja-monkey uyakwazi ukuba bathuthukise waphendula ngumuntu isivinini sina, okusenza sikwazi ijahe isisulu kalula. A amathathu nambili cusp zazo zihlukaniswa ngokucacile ngempela Amazinyo enamandla, ungashiyi amathuba izilwane naphakathi hhayi kuphela, ezifana izinja, kodwa futhi izakhamuzi ezinkulu zase-Afrika. imfene besilisa ungakwazi ukubamba futhi adwengule nensephe, obonisa isivinini kungemalengiso futsi amandla lezi zilwane.
imihlambi kwemithetho: social uhlelo izimfene
Lezi wezinkawu bahlala nemihlambi emikhulu, ukunamathela ngokucacile ukuba isigaba sabaphathi intrapartum. Ehola iphakethe - iduna eziqine. "Iziqondiso" yakhe unquestioningly ukulalela konke.
Phakathi kwamahora emini, i-izimfene kukhona emhlabathini, wathatha insimu enkulu zikanokusho ekwenzeni abakuthandayo. Kulokhu, ukubekwa wezinkawu ihlale ifana: emaphethelweni kukhona abesilisa eqinile, eduze nendawo - nabesifazane futhi amawundlu. Ngenxa yalesi "isakhiwo" umhlambi kuyoba njalo bakwazi ukuvikela nabameleli bayo eziqine, futhi akunandaba ukuthi iluphi uhlangothi nesitha ngokunyenya.
Inja-monkey has umbono bukhali futhi ubona ingozi kude. Uma lokhu umholi kuveza isignali umsindo isici. Lokhu isignali angasebenzisa obunye izilwane - uhlobo kanzima bangezwa isixwayiso.
Endabeni ka-alamu izimfene ukukhuphuka izihlahla bese ulinda ngaphandle ingozi.
izindaba yokubonisana uthando uthando nokukhiqizwa izimfene
Adult imfene zesifazane ilungele sokukhwelana njalo ngenyanga. ifomu Iduna nensikazi pair ngaleso sikhathi kokuzalela. Kuyaphawuleka ukuthi ngalesi sikhathi "Cavalier" kwezithandani "inkosikazi" elilodwa kuphela.
Ukukhulelwa kumuntu wesifazane inja-monkey ihlala ngokwesilinganiso sezinyanga eziyisithupha futhi liphethe ngamazwi ukuzalwa komntwana, ezimweni ezingajwayelekile kakhulu - amawele.
Ukuze izinkawu osanda kuzalwa kakhulu ngokucophelela futhi ngokuqapha: kuqala izingane ebeleni kukamama, tenaciously ephethe izinwele zakhe; kamuva - emhlane wakhe. izimfene Grown ngokwethukela kokushiya umama ukudlala nabanye namazinyane azo, kodwa abazali izinhlelo zokulawula akusho buthaka - izinkawu inja esinamakhanda ungashiyi izingane zingagadiwe futhi ungavumeli kubo ukudlala kakhulu ngamandla.
Izimfene asesabi cishe akukho izilwane. Ngisho noma izindlela zabo kukhona izindlovu noma obhejane, izinkawu bayanqikaza akhale kubo - abayikho iphunga okukhulu ukuthi izilwane ezinkulu akusho ukusongela kwabo.
Okukhishwayo kuphela izingwe namabhubesi. Lezi izilwane ezidla ezinye sibonga ijubane Amazing kanye namandla ongaphumelela yokuzingela izimfene. Kodwa abazingela ngokungemthetho uthwebule lezi zilwane ezingavamile kuholela yokuthi labantu yabo wancipha kakhulu, kanye nemithetho yemvelo inja-zizalela izinkawu - zicekela phansi. Ezindaweni ekubambeni izingwe namabhubesi kukhona nokwanda okuphawulekayo inombolo wezinkawu.
izakhamizi Afrika banesimo sengqondo esingaqondile kwalezi zilwane. Izinkawu bahlakaniphile, nge oqinile futhi Sassy. Bona buthule asondele imizana zabantu ukuze imikhiqizo inzuzo noma nezilwane ezifuyiwe imbala. Ukuba khona umuntu angenakho ukuwathusa, ngaphandle isiqhwaga ngesibhamu. Wesifazane obaleke nengane imfene hhayi kuphela uyesaba, kodwa futhi kungaba ukuhlasela. Ngeshwa, emizaneni Afrika izimo lapho kwenkawu inja esinamakhanda waklebhula noma badla abesifazane nezingane ukuba ukufa.
Buka izinkawu ezithakazelisa kakhulu: imikhuba yabo, sihlanganise izici bobabili emhlabeni isilwane futhi emvelweni yomuntu. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi izimfene nice and smart kungenzeka, akufanele sikhohlwe ukuthi zingabantu wokuqala nomkhulu kunabo bonke - izilwane ongabonisa ubudlova namandla okwamanje ezingalindelekile neze.
Groundhog (marmot) - isilwane esibalulekile
Nutcracker: inyoni aphume ehlathini
Buckeyes - izihlahla ngoba Ukuvuselela Uhlaza Lwehlathi ezisemadolobheni
Uyini anomaly kazibuthe futhi kungani kungase kube into enjalo?
Indlela yokwazi i-Inthanethi nomfana? Ukwazi kanjani umfana onthanethi ku-inthanethi?
Ngokungafani zamukelwa kabanzi ezinkolweni esuka ebuKatolikeni ukholo isizathu
Pasta amakhukhi oda - eseyintsha imikhiqizo yokukhangisa.
Indlela ukulungiselela isaladi "Caprice": iresiphi zakudala futhi ezimbalwa zokudala
Indlela ukujabulisa indoda embhedeni, hhayi kokuba umuzwa?
Komzimba? Kuyini futhi kuphi? Ungasiza kanjani??